ADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA : ZARA RAHA MISY 87 HATRETO IREO BASY TSY ARA-DALÀNA VOAANGONALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA : ZARA RAHA MISY 87 HATRETO IREO BASY TSY ARA-DALÀNA VOAANGONA
ADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA : ZARA RAHA MISY 87 HATRETO IREO BASY TSY ARA-DALÀNA VOAANGONA
Tsy mbola mahatratra ny zato ny isan’ireo basy voaangona ao anatin’izao iray volan’ny “amnistie des armes” izao. Ny eo anivon’ny Zandarimaria sy ny Tafika no nahavita tatitra vonjimaika.
Nifanindry ny iray volana hahafahana mamerina ireo basy eny amin’ny mpitandro ny filaminana tsy misy arakaraka sy ny hetsika “Mandio” an’ny Zandarimaria. Marihina moa fa ny tanjon’ireto hetsika ireto dia hanangonana ireo basy tsy ara-dalàna. Misasaka izao ny volana oktobra, saingy ny zandary hatreto no manana ny isa ambony indrindra amin’ireo basy voaangona.
“Mahatratra 63 ny isan’ireo basy voaangonay nandritra ny hetsika Mandio izay mifameno amin’ny iray volan’ny ‘amnistie des armes’. Telo amin’izany no fitaovam-piadiana mahery vaika”, hoy ny commandant Andrianarisaona Herilalatiana, eo anivon’ny seraseran’ny Zandarimariam-pirenena.
Tao Fianarantsoa no fantatra fa nanaterana ireo basy mahery vaika telo ireo. Olona iray moa no tompon’ny roa amin’izany, rehefa nofotorina ny teo anivon’ny Zandarimaria. Nisandrahaka nanerana ny Nosy kosa anefa ny nahazoana ireo ambiny, raha tsy hilaza afa-tsy ireo basim-borona 47 sy basy vita gasy 10. Ny ampahany amin’ireo dia fantatra fa eo an-dàlam-panatanterahana ny fampanarahan-dalàna ireo antotan-taratasy ny tompony, saingy misy ireo tsy maintsy hogiazana.
Ho an’ny eo anivon’ny Tafika indray dia, efa mazava ireo notazomina sy ireo naverina tamin’ny tompony. Izany hoe miankina amin’ny taratasy fahazoan-dàlan’ireo basy no nanapahan’izy ireo hevitra momba izany.
“Basy 6 no nohazonina ka ny iray amin’izany no mahery vaika, izay naterin’olona tao amin’ny biraon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena tany Toamasina voalohany. Nahatratra 18 kosa ny isan’ireo nohamarinina ka ara-dalàna ny taratasy fihazonana azy, na ihany koa ny famindrana azy”, raha ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena hatrany.
Hatramin’ny omaly kosa ny tao amin’ny Polisim-pirenena, izay voakasik’ity iray volan’ny famerenana sy ny fampanarahan-dalàna ireo basy ity dia, nilaza ny tsy mbola manana antotanisa. Ny fipariahan’ny tobin’izy ireo no voalaza ho anton’izany. Afaka andro vitsy anefa dia hikatona ny iray volana natokana ho amin’izany.
Raha oharina amin’ny isan’ireo jiolahy mpanao vaky trano sy dahalo mpanao fanafihana araka izany dia, zara raha misy ireo basy voaverina. Na izany aza dia tsy mijanona hatreo ireo antotanisa ireo fa azo antoka ny hiakarany.
Partager la publication "ADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA : ZARA RAHA MISY 87 HATRETO IREO BASY TSY ARA-DALÀNA VOAANGONA"